Sihambile ngo-2020 ISE, Netherlands
Ngo-2020 ISE kwaqhutshelwa e-Amsterdam kusukela ngoFebhuwari 11 kuya ku-14. Njengombukiso ochwepheshe kakhulu eYurophu wokusebenzisa imishini yokubuka umsindo kanye nobuchwepheshe bohlelo lokuhlanganisa ulwazi (obizwa ngokuthi yi-ISE), Kuze kube manje, uyimboni ephumelela kakhulu futhi enkulu kunazo zonke- embukisweni ebanzi eYurophu.
I-ISE ngumbukiso waminyaka yonke, ophethwe yi-Infocomm international, e-RAI Amsterdam, eNetherlands.
Inkampani yethu ikhombise ibhodi yokubhala ye-LCD enezinto ezintsha, ukusula okuyingxenye nokudluliswa nokugcinwa kokusebenza, iningi lama-distrubitors likhulume kakhulu ngemikhiqizo yethu, ebuye yaheha ababukisi abaningi abenze ama-All-In-One Touch Screens ukuzwa futhi baxoxa ngokubambisana.
I-77th Izinsiza kusebenza Education Exhibition e Qingdao
I-Abstract: Umbukiso Wezinsizakalo Zokufundisa we-77 wabanjelwa eQingdao International Exhibition Center ngomhlaka 12, Okhthoba, 2019. Umkhiqizo omusha we-LCD ebhodi emnyama, isixazululo se-smart class ekilasini kanye ne-All-in-one PC wakhanga abasebenza embonini abaningi.
Kuyaziwa ukuthi i-China Educational Equipment Exhibition iyisiteji esikhulu kunazo zonke sokubonisa nokuxhumana, kanye nesibani semakethe futhi. Ibhodi emnyama ye-ILBEST LCD ithole impumelelo entsha ngokususa kwayo ukhiye owodwa, ukusula okuyingxenye, ukuhanjiswa okuhambisanayo kanye nemisebenzi yokusindisa. Umkhiqizo omusha uphinde wahlonishwa ngabasabalalisi, othisha, abazali kanye nabasebenza emkhakheni wezemfundo.
I-LONBEST LCD Blackboard ekhonjiswe eWorld DIDAC ASIA
Ngo-Okthoba 9-11, 2019, iWorld DIDAC Asia isingathwe eBangkok, eThailand. Eminyakeni eyishumi edlule, lo mbukiso ukhule waba umbukiso obonakalayo womkhakha wezokusiza ekufundeni eSoutheast Asia. Idume ngabalaleli bayo abanohlonze kanye nekhwalithi ephezulu. Inedumela elihle kakhulu kubabonisi baseChina. Umbukiso ubanjwa minyaka yonke futhi uyisiteji esibaluleke kakhulu samabhizinisi ukuvula imakethe yaseThai.
Sifinyelele esivumelwaneni sokubambisana nozakwethu - i-Starcast, ngokuhlanganyela ukuhlela nokuhambela lo mbukiso, sigxile ebhodini le-LCD, ukwakha uhlelo lokufundisa oluhlakaniphile. Idonse abaholi bezikole nothisha abaningi ukuzizwela. Umqondo wayo wokuvikela uthuli nowezemvelo kwezempilo, ugcine ulwazi lokuqala lokubhala, wahlonishwa kakhulu ngabaholi nothisha, futhi wanikeza iziphakamiso eziningi ezakhayo.
Siphinde saheha ababukeli abavela eFrance, eSouth Korea naseSpain, nabo ababekhuluma kakhulu ngemikhiqizo yethu. Phakathi kwabo, ababonisi baseFrance nabaseNingizimu Korea basho ngokusobala ukuthi bazokhombisa imikhiqizo yethu embukisweni wemishini yezemfundo yaseFrance ngenyanga ezayo, futhi baqale babambisana.
I-Educational IT Solutions Expo, i-EDIX, iTokyo
I-Educational IT Solutions Expo yabanjwa ngoJuni 19-21, 2019, eTokyo, i-EDIX ingumbukiso omkhulu futhi onomthelela omkhulu wemishini yezemfundo eJapan, yithuba elihle kakhulu lokukhuthaza ukuxoxisana nokubambisana, ukwethula imikhiqizo nezinsizakalo ezintsha .
Simenyiwe ukuhambela lo mbukiso, futhi sakhombisa imikhiqizo yethu entsha - ibhodi yokubhala ye-LCD, izinto ezintsha: ezingenalo uthuli, akukho peni, okuluhlaza nokuhlanzekile, ukunakekelwa kwamehlo, ukunakekelwa komoya, njll. Kuthandwa ngabaningi amakhasimende.
Abasabalalisi abaningi banesithakazelo esikhulu ebhodini lokubhala le-LCD, banethemba elikhulu lokuthola imakethe.
Umbukiso Wezinsiza Zemfundo we-76 eChongqing
I-Abstract: Ibhodi emnyama ye-ILBEST ye-LCD yalinganiswa njengo "The Gold Award Product" ku-76th Educational Equipment Exhibition (26th-28, Ephreli, 2019) futhi yajabulela ukuthandwa okukhulu phakathi kwamakhasimende.
Okutholakele mayelana nokubona kude kwezingane ezisencane yiKhomishini Yezempilo Kazwelonke kukhombisa ukuthi izinga lokungaboni kahle kwentsha kwaba ngama-53.6% ngo-2018. Udaba lwezempilo lombono luthathwe ngokungathi sína ngabazali, izikole kanye nomphakathi. Kulesi simo, imikhiqizo "yokunakekelwa kwamehlo" yayithandwa, kanti ibhodi yebhodi ye-LONBEST LCD yayinohlu phakathi kwabo.
Akufani nokukhonjiswa kwe-LCD, i-ILBEST LCD ibhodi emnyama isebenzisa ubuchwepheshe obungeyona i-backlight ukukhombisa umbhalo ngesandla. Awunalo uthuli, akukho misebe, asikho isidingo semashi / izimpawu, / ukunakekelwa kwamehlo, ukususwa okuyingxenye yizinzuzo ngaphezu kwamanye amabhodi amnyama. Cishe abasabalalisi bendawo abangama-30 abavela eChina baba ngabalingani be-LONBEST.
I-ILBBY YAMenyelwa Ukuhambela Umbukiso Wamathuluzi Wokufundisa we-Beijing wama-30
I-Abstract: Umbukiso Wezinsiza Zemishini WaseBeijing wabanjwa ngempumelelo eNational Convention Center ukusuka ngomhlaka 6-8, Mashi, 2019.
I-LONBEST inikezelwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwebhodi le-LCD iminyaka eminingana. Kusukela ukukhiqizwa okuyimpumelelo kwenqwaba eyodwa kusula ibhodi le-LCD ngonyaka odlule, i-LONBEST ithole umsebenzi wokusula ngokwengxenye ukwenza ngcono ulwazi lokubhala. Njengoba ibhodi eliyingqayizivele lokusula i-LCD emakethe yomhlaba, ihehe abalingani abaningi ngokwengeziwe eqenjini le-LONBEST.